စတုတ်ထတနျးကြောငျးသား ငွိမျးမောငျရဲ့ ရညျးစားစာကို ဖတျရငျး ကြောတှပေါ ခမျြးသှားခဲ့တဲ့ ဆရာမလေး…. – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတမြား > စတုတ်ထတနျးကြောငျးသား ငွိမျးမောငျရဲ့ ရညျးစားစာကို ဖတျရငျး ကြောတှပေါ ခမျြးသှားခဲ့တဲ့ ဆရာမလေး….
စတုတ်ထတနျးကြောငျးသား ငွိမျးမောငျရဲ့ ရညျးစားစာကို ဖတျရငျး ကြောတှပေါ ခမျြးသှားခဲ့တဲ့ ဆရာမလေး….
Posted by admin June 6, 2022
အိုဇာတာ ကောငျး / မကာငျး (လူတိုငျးအတှကျ အရေးကွီးပါတယျ)
စတုတ္ထတန်းကျောင်းသား ငြိမ်းမောင်ရဲ့ ရည်းစားစာကို ဖတ်ရင်း ကျောတွေပါ ချမ်းသွားခဲ့တဲ့ ဆရာမေလး
ဆရာမသားကို ဖိုးထောင်ဖင်ချတယ် ဟေ ငြိမ်းမောင် တိုင်လိုက်သည့်စကားကြောင့် ဆရာမေငါက္ခနဲ မတ်တပ် ထရပ်လိုက်သည်။သူတိုင်လိုက်သည်ကိုတော့ အတန်းထဲမှ မည်သူမှ မကြားလိုက်ဖိုးထောင် လာစမ်း ဆရာမခေါ်လိုက်တော့တစ်တန်းလုံး အသံတိတ်ပြီး ဖိုးထောင်အား စိတ်ဝင်တစားကြည့်ကြသည်။
ဖိုးထောင် ကား ကုတ်ချောင်းချောင်းနှင့် အတန်းရှေ့အရောက်၌ ငြိမ်းမောင် က သားကိုအရင်လုပ်တာ ဆရာမသူကဘာလုပ္တာလဲ သား ညီမေလး ကို ရည်းစား စာပေးတယ် ဟေ ဟုတ်လားငြိမ်းမောင် စတုတ္ထတန်းကျောင်းသား ငြိမ်းမောင်တစ်ယောက်နည်းနည်းတွန့်သွား၏မှန်၏ သူရေးထားသော ရည်းစား စာက ဖိုးထောင်ညီမလက် ထဲသို့ ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
အမှန်က သား သူ့ညီမကိုပေးတာမဟုတ်ဘူး ဆရာမေဟ ဒါဆို ဘာလုပ်ဖို့တုန်း တခြားတစ်ယောက်ကိုပေးဖို့လုပ်နေတာကို သူ့ညီမလေး က လုသြားတာ ဟင် ဟုတ်လားဖိုးထောင်ဆရာမက ဖိုးထောင်ဖက်သို့ တစ်ခါလှည့်ပြန်သည် ကျောင်းသား အားလုံးကေတာ့ ငြိမ်သက်လျှက် ။
မဟုတ်ဘူးဆရာမသူပေးတာ ပြီးတော့ စာထဲမွ ညစ်ညမ်းတာတွေ ရေးထားတယ်ဟင် ငြိမ်းမောင် နင့်ကိုဒါတွေတတ်အောင် ဘယ်သူသင်ပေးတာလဲ ဆရာမပဲလေငိန်ဆ ရာမ ပဲ သား ကို စာသင်ပေးတာပြောတာဟင်းတုတ်စာတော့ မိတော့မယ် ဆရာမက ဖိုးထောင် ဖက်သို့တစ်ခါလှည့်ပြန်သည်။
ကဲ ဖိုးထောင် ငါ့ကိုစာဖတ်ပြ ဟုတ်သူ့အိတ်ထဲမှ ခေါက်ထားသော စာရွက်ကေလးအား ထုတ်လိုက်ပြီးဖြန့်လိုက်သည်။ပြီးနောက် အဟမ်း အဟမ်း ဟဲ့ စာထဲမွာ အဲဒါပါလို့လားမပါဘူးဆ ရာမမြန်မာနိုင်ငံက လူမွန်သမ်ွက တစ်ခုခုပြောခါနီးရင် အဲလိုပဲ ချောင်းဟန့်တယ်လေ အေးပါဟယ် ဖတ်ပါ သိုး ဟဲ့ ဘယ့်နှယ်က သိုးတုန်း သိုးရေခြုံတဲ့ ဝံပုလွေ ပါ ဆရာမငြိမ်းမောင်က ဝင်ထောက်သည် ။
နင် တိတ်တိတ်နေငြိမ်းမောင်ကဲ ဖိုးထောင်ဆက်ဖတ် ငါဖြည့်ပြီး နားထောင်ပေးမယ်လိလိုပဲ ကိုယ့်ဖက် ကိုယ်ရပ်တာ မဟုတ်ပါဘူးဟယ် ဆရာမပါးစပ် အဟောင်းသားဖြစ်သွားသည် ။
ငြိမ်းမောင် နင် ဒါတော့များသွားပြီ စာ အစကတည်းကမိုက်ရိုင်းတာ ဆက်ဖတ်စမ်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငြိမ်းမောင်အခ် တတ်ဆုံးပါဟယ် ငြိမ်းမောင် နင်တော့လား ဆရာမက အသားမ်ား တဆတ်ဆတ္တုန္ကာ ရိုက်ချင်လာသည်။ငြိမ်းမောင် လည်း တကိုယ္လုံး တုံယင်နေသည် ။ကြောက်၍တော့မဟုတ် သူ့ရည်းစားစာကို လူအားလုံးကြားနေရပြီဖြစ်၍ ဖြစ်သည်။
မင်းမလိုအပ်လည်း ငါက ဆက်ချနေမှာပါ ညယ် မင်းနှုတ်ခမ်းလေးတွေက စပ ဖူးလေးတွေလိုပဲ ဟာ သိပ် ခ် ချင်စရာကောင်းတယ်
ဗုဒ္ဓေါ စားရပြီဆိုရင် ညေန ဘုရားမှာလာတွေ့ပါ အချတွေနဲ့ စောင့်နေမယ်စာကား အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်၏ ငြိမ်းမောင်အားဆရာမလှည့်ကြည့်သည် ငြိမ်းမောင် ဗ်ာဆ ရာမ ဒေါသပုန်ထလေပြီ ခုံပေါ်မှ တုတ္ကို ဆွဲယူလိုက်တော့သည်နင်ဘာလို့ဒါတွေရေးတာတုန်း သားရေးတာ အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး
သားအလွတ်ဖတ်ပြပါမယ်အေး ဖတ်စမ်း လိပ္လိုပဲ ကိုယ့်ဖက်ကိုယ်ရပ်တာမဟုတ်ပါဘူး ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငြိမ်းမောင်အချစ်တတ်ဆုံးပါမင်းမလိုအပ်လည်း
ငါကဆက်ချစ် နေမှာပါ မင်းနှုတ်ခမ်းလေးတွေက စံပါယ်ဖူးလေးတွေလိုပဲ သိပ်ချစ် ချစ်စရာကောင်းတယ် စာရပြီဆိုရင် ညေနဘုရားမွာ လာတွေ့ပါအချစ်တွေနဲ့ စောင့်နေမယ်ဟော ဆရာမက ဖိုးထောင်ဖက်သို့ လှည့်ပြန်သည်။ဟဲ့ နင်ဖတ်တော့ တစ်မျိုးပါလား သူရေးထားတာလေ ဆရာ ဒီမှာစာကိုဖတ်ကြည့်တော့လည်း ဖိုးထောင်မှန်သည် ။
ထို့ကြောင့် ဆရာမသဘောပေါက်လိုက်ပြီ ကဲ ဒါက စာလုံးပေါင်းမမှန်လို့ နားလည်မှုလွဲတာပါ အားလုံး ကျေအေးလိုက်တော့ဟုတ်ဆ ရာမ
ဖိုးထောင် သွားလို့ရပြီ ငြိမ်းမောင် ပြောစရာရှိတယ် ဟုတ် ကဲ ပြောပါဦး အဲဒီစာသားတွေ ဘယ္က ကူးချလာတာတုန်း ရင်ထဲကလာတာပါဆရာမရယ် နှလုံးသားထဲကပါအမယ် ကဲ ပြောပါဦး စာက ဘယ်သူ့ကိုပေးဖို့လဲ ပြောရင် ဆရာမက ရိုက်မှာပေါ့မရိုက်ပါဘူး မင်း စာရေး တာတော်တယ် အဲဒီစာကို
မင်းချစ်တဲ့ ကောင်မလေးသာရရင် သူ ချက်ချင်းအဖြေပြန်ပေးလောက်တယ်သိလားတကယ်လား ဆရာမတကယ်ပေါ့ဒါဆို သား ဘယ်သူ့ကို ပေးမှာလည်းပြောပြမယ်
အေး ပြောပြ တကယ်တော့လေ အဲဒီစာက ဆရာမကို ပေးမှာဘာ သေနာကျလေး သေပြီသာမှတ်Ref ငြိမ်းမောင်မူရင်းတင်ထားသူအား လေးစားစွာ ခရက်ဒစ်ပေးပါသည် ဘဝအမောတွေပြေပျောက်နိုင်ကြပါစေ။
စတုတ်ထတနျးကြောငျးသား ငွိမျးမောငျရဲ့ ရညျးစားစာကို ဖတျရငျး ကြောတှပေါ ခမျြးသှားခဲ့တဲ့ ဆရာမလေး
ဆရာမသားကို ဖိုးထောငျဖငျခတြယျ ဟေ ငွိမျးမောငျ တိုငျလိုကျသညျ့စကားကွောငျ့ ဆရာမငေါက်ခနဲ မတျတပျ ထရပျလိုကျသညျ။သူတိုငျလိုကျသညျကိုတော့ အတနျးထဲမှ မညျသူမှ မကွားလိုကျဖိုးထောငျ လာစမျး ဆရာမချေါလိုကျတော့တဈတနျးလုံး အသံတိတျပွီး ဖိုးထောငျအား စိတျဝငျတစားကွညျ့ကွသညျ။
ဖိုးထောငျ ကား ကုတျခြောငျးခြောငျးနှငျ့ အတနျးရှအေ့ရောကျ၌ ငွိမျးမောငျ က သားကိုအရငျလုပျတာ ဆရာမသူကဘာလုပ်တာလဲ သား ညီမလေး ကို ရညျးစား စာပေးတယျ ဟေ ဟုတျလားငွိမျးမောငျ စတုတ်ထတနျးကြောငျးသား ငွိမျးမောငျတဈယောကျနညျးနညျးတှနျ့သှား၏မှနျ၏ သူရေးထားသော ရညျးစား စာက ဖိုးထောငျညီမလကျ ထဲသို့ ရောကျနပွေီဖွဈသညျ။
အမှနျက သား သူ့ညီမကိုပေးတာမဟုတျဘူး ဆရာမဟေ ဒါဆို ဘာလုပျဖို့တုနျး တခွားတဈယောကျကိုပေးဖို့လုပျနတောကို သူ့ညီမလေး က လုသွားတာ ဟငျ ဟုတျလားဖိုးထောငျဆရာမက ဖိုးထောငျဖကျသို့ တဈခါလှညျ့ပွနျသညျ ကြောငျးသား အားလုံးကတော့ ငွိမျသကျလြှကျ ။
မဟုတျဘူးဆရာမသူပေးတာ ပွီးတော့ စာထဲမှ ညဈညမျးတာတှေ ရေးထားတယျဟငျ ငွိမျးမောငျ နငျ့ကိုဒါတှတေတျအောငျ ဘယျသူသငျပေးတာလဲ ဆရာမပဲလငေိနျဆ ရာမ ပဲ သား ကို စာသငျပေးတာပွောတာဟငျးတုတျစာတော့ မိတော့မယျ ဆရာမက ဖိုးထောငျ ဖကျသို့တဈခါလှညျ့ပွနျသညျ။
ကဲ ဖိုးထောငျ ငါ့ကိုစာဖတျပွ ဟုတျသူ့အိတျထဲမှ ခေါကျထားသော စာရှကျကလေးအား ထုတျလိုကျပွီးဖွနျ့လိုကျသညျ။ပွီးနောကျ အဟမျး အဟမျး ဟဲ့ စာထဲမှာ အဲဒါပါလို့လားမပါဘူးဆ ရာမမွနျမာနိုငျငံက လူမှနျသမျှက တဈခုခုပွောခါနီးရငျ အဲလိုပဲ ခြောငျးဟနျ့တယျလေ အေးပါဟယျ ဖတျပါ သိုး ဟဲ့ ဘယျ့နှယျက သိုးတုနျး သိုးရခွေုံတဲ့ ဝံပုလှေ ပါ ဆရာမငွိမျးမောငျက ဝငျထောကျသညျ ။
နငျ တိတျတိတျနငွေိမျးမောငျကဲ ဖိုးထောငျဆကျဖတျ ငါဖွညျ့ပွီး နားထောငျပေးမယျလိလိုပဲ ကိုယျ့ဖကျ ကိုယျရပျတာ မဟုတျပါဘူးဟယျ ဆရာမပါးစပျ အဟောငျးသားဖွဈသှားသညျ ။
ငွိမျးမောငျ နငျ ဒါတော့မြားသှားပွီ စာ အစကတညျးကမိုကျရိုငျးတာ ဆကျဖတျစမျး ကမ်ဘာပျေါမှာ ငွိမျးမောငျအချ တတျဆုံးပါဟယျ ငွိမျးမောငျ နငျတော့လား ဆရာမက အသားများ တဆတျဆတ်တုန်ကာ ရိုကျခငျြလာသညျ။ငွိမျးမောငျ လညျး တကိုယ်လုံး တုံယငျနသေညျ ။ကွောကျ၍တော့မဟုတျ သူ့ရညျးစားစာကို လူအားလုံးကွားနရေပွီဖွဈ၍ ဖွဈသညျ။
မငျးမလိုအပျလညျး ငါက ဆကျခနြမှောပါ ညယျ မငျးနှုတျခမျးလေးတှကေ စပ ဖူးလေးတှလေိုပဲ ဟာ သိပျ ချ ခငျြစရာကောငျးတယျ
ဗုဒ်ဓေါ စားရပွီဆိုရငျ ညနေ ဘုရားမှာလာတှပေ့ါ အခတြှနေဲ့ စောငျ့နမေယျစာကား အဆုံးသတျသှားပွီဖွဈ၏ ငွိမျးမောငျအားဆရာမလှညျ့ကွညျ့သညျ ငွိမျးမောငျ ဗျာဆ ရာမ ဒေါသပုနျထလပွေီ ခုံပျေါမှ တုတ်ကို ဆှဲယူလိုကျတော့သညျနငျဘာလို့ဒါတှရေေးတာတုနျး သားရေးတာ အဲလိုမဟုတျပါဘူး
သားအလှတျဖတျပွပါမယျအေး ဖတျစမျး လိပ်လိုပဲ ကိုယျ့ဖကျကိုယျရပျတာမဟုတျပါဘူး ကမ်ဘာပျေါမှာ ငွိမျးမောငျအခဈြတတျဆုံးပါမငျးမလိုအပျလညျး
ငါကဆကျခဈြ နမှောပါ မငျးနှုတျခမျးလေးတှကေ စံပါယျဖူးလေးတှလေိုပဲ သိပျခဈြ ခဈြစရာကောငျးတယျ စာရပွီဆိုရငျ ညနေဘုရားမှာ လာတှပေ့ါအခဈြတှနေဲ့ စောငျ့နမေယျဟော ဆရာမက ဖိုးထောငျဖကျသို့ လှညျ့ပွနျသညျ။ဟဲ့ နငျဖတျတော့ တဈမြိုးပါလား သူရေးထားတာလေ ဆရာ ဒီမှာစာကိုဖတျကွညျ့တော့လညျး ဖိုးထောငျမှနျသညျ ။
ထို့ကွောငျ့ ဆရာမသဘောပေါကျလိုကျပွီ ကဲ ဒါက စာလုံးပေါငျးမမှနျလို့ နားလညျမှုလှဲတာပါ အားလုံး ကအြေေးလိုကျတော့ဟုတျဆ ရာမ
ဖိုးထောငျ သှားလို့ရပွီ ငွိမျးမောငျ ပွောစရာရှိတယျ ဟုတျ ကဲ ပွောပါဦး အဲဒီစာသားတှေ ဘယ်က ကူးခလြာတာတုနျး ရငျထဲကလာတာပါဆရာမရယျ နှလုံးသားထဲကပါအမယျ ကဲ ပွောပါဦး စာက ဘယျသူ့ကိုပေးဖို့လဲ ပွောရငျ ဆရာမက ရိုကျမှာပေါ့မရိုကျပါဘူး မငျး စာရေး တာတျောတယျ အဲဒီစာကို
မငျးခဈြတဲ့ ကောငျမလေးသာရရငျ သူ ခကျြခငျြးအဖွပွေနျပေးလောကျတယျသိလားတကယျလား ဆရာမတကယျပေါ့ဒါဆို သား ဘယျသူ့ကို ပေးမှာလညျးပွောပွမယျ
အေး ပွောပွ တကယျတော့လေ အဲဒီစာက ဆရာမကို ပေးမှာဘာ သနောကလြေး သပွေီသာမှတျRef ငွိမျးမောငျမူရငျးတငျထားသူအား လေးစားစှာ ခရကျဒဈပေးပါသညျ ဘဝအမောတှပွေပြေောကျနိုငျကွပါစေ။
Previous Article အခုလိုခတျေကွီးမှာ စိနျရှတှေထေကျ ရှားသှားပွီဖွဈတဲ့ လူကောငျးတယောကျ (ရှားမှ ရှားပါပဲဗြာ)
Next Article ကိုယျတိုငျတောငျ Personal နဲ့ Professional မကှဲဘဲဇာဏျခီလို ယောကျြားမြိုးလိုခငျြရငျတော့ရာဟုထောငျ့သှားပွီး ကြှမျးထိုးနလေိုကျတော့….